DHAGEYSO Dowlada Somalia oo dib u eegis ku samaynaysa heshiis ay la gashay shirkada ka sahqaysa madaarka Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Dowlada Somalia oo dib u eegis ku samaynaysa heshiis ay la gashay shirkada ka sahqaysa madaarka Muqdisho.
Xukuumada fedraalka Somalia ayaa wada qorsho dib u eegis loogu sameynayo heshiisyo ay horay ula gashay shirkada lagu magacaabo sahal oo qaabilsan gaadiidka dadka geeya madaarka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho sidoo kalena ka soo qaada.
Masuuliyiinta shirkadaan iyo madaxda wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlada Somalia ayaa isla gartay in markale dib u eegis lagu sameeyo qodobadii horay loo wada sxiixday ee ku saabsanaa shaqada shirkadaan si loo saxo waxyaabihii qaldamay.
Xukuumadu waxay sheegtay in shirkadaan amni dartiis loogu ogolaaday howlaha ay ka wada gagida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn kaga faa’iidaysteen howlaheeda.
Wasiirka wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumada Fedraalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Oomaar ayaa xusay inay muhiim tahay dib u eegista lagu samaynayo Heshiiskii ay shirkadaan la gashay dowlada Fedraalka Soomalia ee u ogolaatay inay dadka garoonka ka baxaya iyo kuwa soo dagaya qaado ama ay gayso ayna mudan yihiin in lagu dhiira galiyo howlaha ay shacabaka u hayaan.
Shirkada Sahal oo ka howlgasha garoonka diyaaradaha Adan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa horay Heshiis ula gashay dowladii tan ka horaysay waxayna xarunteedu ku taalaa meel aan sidaas kaga fogayn gagida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasoo dadka baabuur looga qaado oo lagu geeyo garoonka ama garoonka looga soo qaado ayadoo la gaynayo halka ay doonayaan,dadkaas ayaana waxaa laga qaadaa lacago kala duwan oo lagula heshiiyo.
← Deegaanada maamulka Hirshabeele oo laga hirgalinayo golaha deegaanka.
Shirka amaanka qaranka oo Muqdisho ka furmaya →